ယခုသတင်းအတွက် မှတ်ချက်အားလုံးကို ဖတ်ရှုန်
မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။
အမည် (မဖော်ပြလျှင်လည်းရပါသည်။) နေရပ် (မဖော်ပြလျှင်လည်းရပါသည်။)
ပုံမှာ မြင်ရသည့် စာလုံးများအတိုင်း ထည့်သွင်းပေးရပါမည်။
Jun 20, 2012 10:58 PM
Jun 20, 2012 01:03 PM
Jun 17, 2012 10:29 AM
နိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ တိုင်းတပါးသားရန်ကိုကာကွယ်တာဟာ မြင့်မြတ်တေလို့ခန်ယူပါတယ်
Jun 17, 2012 07:14 AM
We, all people in myanmar agreed to Our Elder Brother, Ko Ko Gyi. He showed his desire and this is also our people of Myanmar s’ desire.We hate terrorists.
Jun 16, 2012 02:27 AM
If Malausia government can gave resident to them , that will be win win situation. They will get good life and get peace.
Jun 16, 2012 01:27 AM
Rohingya Bangali is the one who initiate the problem. You must stop yourself. Go back to your own mother land - Bangaladash.
Jun 15, 2012 11:59 PM
ရိုဟင်ဂျာသည် မြန်မာလူမျိုးမဟုတ်ပါ။ ဒေါ်စု ပြောကြားချက်အရ။
Jun 15, 2012 11:31 PM